मोदी सत्ता विरुद्ध नयाँ दिल्लीमा बृहत किसान मार्च आन्दोलन – www.janabato.com
Latest Taja-update TOP STORIES अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास समाचार
मोदी सत्ता विरुद्ध नयाँ दिल्लीमा बृहत किसान मार्च आन्दोलन
१५ मंसिर २०७५, शनिबार ०३:५२ December 1, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
एजेन्सी/भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतका किसानहरुले सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेका छन् । किसानले लिएको ऋण मिनाहा र उब्जनीको डेढ गुना मूल्य बढाउनु पर्ने माग राख्दै विभिन्न राज्यबाट भारतको राजाधानी नयाँदिल्लीको रामलिला मैदानमा किसानहरु भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
दुई दिने किसान मुक्ति मार्च आन्दोलन हिजो विहिबार देखि सुरु भई आज शुक्रबार साँझसम्म जारी रहनेछ । उनीहरु संसद भवनमा जानको लागि रोकिएमा नाङ्गै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको पहिलो माग पूर्णरुपमा ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र दोश्रो माग उब्जनीमा डेढ गुणा मुआव्जा माग रहेको छ ।
ऐतिहासिक रामलिला मैदानमा रातो टोपी लगाएका र रातो झण्डा बोकेका किसानहरुले ‘अयोध्या नही, कर्ज मुक्त चाहिए’ जस्ता नारा लगाइरहेका छन् ।
यस आन्दोलनमा डाक्टर, वकिन, पूर्व सैनिक, विभिन्न पेशामा काम गर्ने जागिरे तथा छात्र छात्राहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानबाट दिल्लीको प्रवेश मार्गमा एकत्र भई आन्दोलनकारीहरु रामलीला मैदानसम्म पैदल तथा सवारी साधनमा समेत आज मार्चपास गरिरहेका छन् ।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिको अगुवाइमा लगभग २०० किसान संगठन, राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संगठनले किसानको मागको समर्थन गर्दै आन्दोलनमा भाग लिएका छन् । उक्त समितिका सचिव अवीक शाहा र स्वराज इण्डिया का संयोजक योगेन्द्र यादवको अगुवाईमा दक्षिण पश्चिमी दिल्लीको बिजवासनबाट विहान सुरु भएको किसान मुक्ति यात्रा लगभग २५ किमीसम्म गरिएको पदयात्रा बिहीबार साँझमा मात्र रामलीला मैदान पुगेको थियो ।
अखिल भारतीय किसान सभाका सचिव अतुल कुमार अनजान सहित संगठनका अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी रामलीला मैदानमा आन्दोलनकारीको सहयोग र सुविधाको लागि उपस्थित भएका थिए ।
फरीदावादतर्फको आश्रम हुँदै रामलीला मैदान जाँदै गरेको किसान मुक्ति यात्राको अगुवाइ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर र वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथले गरे ।
यसैबीच पूर्व सैनिक संगठनले पनि किसानको मागको समर्थन गर्दै किसान मुक्ति यात्रामा उपस्थित भएका थिए । संगठनका प्रमु्ख मेजर जनरल सतबीर सिंहले भने पूर्व सैनिक किसान आन्दोलनमा दुई दिनसम्म साथ दिनेछ । अनजानले भने किसानको समर्थनका लागि डाक्टर, वकिल, शिक्षक, रंगकर्मी तथा छात्र संगठन सहित समाजका सबै वर्गले समेत किसान आन्दोलनमा भाग लिएको यो पहिलो अबसर हो ।
साठी हजार मानिस अट्ने उक्त रामलीला मैदानमा एम्म, आरएमएल, लोकनायक, हिन्दुराव, अरुणा आसिफा अली अस्पताल सहित दिल्लीको विभिन्न अस्पतालबाट करीब पच्चीस देखि तीस डाक्टरले रामलीला मैदानमा किसानको लागि एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरे । यसका साथै विभिन्न सामाजिक संगठनको तर्फबाट खाना, नास्ता, पानी तथा राती जाडोबाट बच्न आवश्यक कपडाको व्यवस्था गरेका छन् ।
किसानहरुले गरेको उक्त आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौडाले बिहिबार भने कुनै पनि सरकारले किसानको समर्थन विना टिक्न सक्दैन । गौडाले किसानलाई समर्थन गर्दै भने म तपाईहरुलाई आश्वासन दिन आएको छु कि संघर्षको यस अवसरमा म तपाईहरुको साथमा छु । म तपाईहरुको दुःखलाई बुझ्न सक्छु ।
पछि रामलीला मैदानमा संवाददातासँग कुराकानी गर्दै केन्द्र सरकारले किसानको माग सुन्नलाई आग्रह गरे । उनले भने कुनै पनि सरकार किसानको समर्थन बिना चल्दैन । केन्द्र सरकारले किसानको माग सुन्नै पर्छ । यस देशका किसानहरु जागिसकेका छन् र उनीहरुलाई बेवकुफ बनाउन मिल्दैन ।
देशका विभिन्न क्षेत्र मसलन, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि ठाउँबाट किसान ट्रेन र ट्रयाक्टर चढेर किसान मुक्ति मार्चमा आएका हुन् ।
← श्री धर्मपुर माविको ५८ औं बार्षिकोत्सव सुरु, ३ दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरि मनाइने
सत्यवती गाउँपालिका ठूलो लुम्पेकमा कृषि फस्टायो, किसानलाई अनुदानदेखि गाडीसम्म →
‘आमाहरुको खुशीका लागी गायनमा लागेँ’ : सुदीप सिंजाली मगर
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०२:३२ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on ‘आमाहरुको खुशीका लागी गायनमा लागेँ’ : सुदीप सिंजाली मगर
३ चैत्र २०७५, आईतवार ०४:१६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोडौं : आचार्य
दुवै सदनका संसदले लिए सपथ
२० फाल्गुन २०७४, आईतवार १४:४६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on दुवै सदनका संसदले लिए सपथ